ပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း- ဖိုက်ဘာအမြန်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေက ဘယ်နိုင်ငံတွေလဲ။ အ | Absolut ခရီးသွား
မော်နီကာဆန် | | အခြားသူများကို
ငါတို့ မစဉ်းစားတော့ဘူး။ အင်တာနက်မရှိသောဘဝအိမ်မှာရော ကျွန်တော်တို့ရဲ့ မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်မှာပါ မပါပါဘူး။ ecommerce တွင် စျေးဝယ်ခြင်း၊ တယ်လီဖုန်းဆက်ခြင်း၊ လူမှုကွန်ရက်များကို ရှာဖွေခြင်း၊ တိုက်ရိုက်ဂိမ်းများကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုခြင်း စီးရီးများသည် ကျွန်ုပ်တို့ ယခုပြုလုပ်နေသည့် နေ့စဉ်လုပ်ဆောင်မှုအချို့ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီကအထိ ဝေးကွာနေပုံရသည်။ ဒါ​ပေမယ့်​ ဒါ​တွေအကုန်​လုံးလုပ်​နိုင်​ဖို့အတွက်​ internet speed ​ကောင်းဖို့ လိုအပ်​ပါတယ်​။ ကမ္ဘာ့ဖိုက်ဘာအမြန်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံတွေက ဘယ်နိုင်ငံတွေလဲ။
US Ookla မှပြုလုပ်သော လေ့လာမှုတစ်ခုအရ SpeedTest စမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့် အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုအမြန်နှုန်းကို တိုင်းတာသည့် 2021 ခုနှစ်၊ ပုံသေအင်တာနက်အမြန်ဆုံးရှိသည့်နိုင်ငံသည် မိုနာကိုဖြစ်သည်။ပျမ်းမျှမြန်နှုန်း ၂၆၀ Mbps၊ အာရှသားစင်ကာပူနှင့်ဟောင်ကောင်မှ ၂၅၂ နှင့် ၂၄၈ မီဂါဘိုက်တို့အသီးသီးရှိသည်။
၏အစိတ်အပိုင်းအတွက် မိုဘိုင်းအင်တာနက်သည်များမှာ အမြန်နှုန်း ၁၉၃ မီဂါဘိုက်ဖြင့်ဤစာရင်းတွင်ထိပ်ဆုံးမှရပ်တည်နေသောအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု. ဥရောပတိုက်အတွင်း၊ နော်ဝေး (စတုတ္ထနေရာ) သည် ပျမ်းမျှအမြန်နှုန်း 167 Mbps နီးပါးရှိသော ဤနယ်နိမိတ်အတွင်း ပထမဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သည်။
စပိန်သည်အခြေအနေနှစ်ခုစလုံးတွင်အောက်ဆုံး၌ရှိသည်. ပုံသေဆက်သွယ်မှုအင်တာနက်အမြန်နှုန်းအရ ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသည် ပျမ်းမျှဒေါင်းလုဒ်အမြန်နှုန်း 194 Mbps ဖြင့် အဆင့် 37 တွင်ရှိသည်။ မိုဘိုင်းအင်တာနက်အသုံးပြုမှုတွင် စပိန်နိုင်ငံသည် 59 တွင် XNUMX megabytes သာရှိသည်။ မင်းအိမ်ထဲမှာအင်တာနက်အမြန်နှုန်းကဘာလဲမင်းသိချင်ရင်ငါတို့မင်းကိုထားခဲ့မယ် မြန်နှုန်းစမ်းသပ်မှု.
ကမ္ဘာပေါ်တွင် အင်တာနက်အသုံးပြုသူ ပိုများလာသည်။ အဆိုပါအရေအတွက်သည် 4.665 ခုနှစ်တွင် ခန့်မှန်းခြေ 2020 သန်းအထိ တိုးလာခဲ့ကြောင်း International Telecommunications Union မှ သိရသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေသည် ၇၈၄၁ သန်းရှိကြောင်း ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်ကျော် (၅၉.၄%) သည် ၎င်းတို့၏နေ့စဉ်ဘဝတွင် အင်တာနက်ကို အသုံးပြုကြသည်။.
ထိုသို့ရှင်းပါတယ် အင်တာနက် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ရ လူတွေရဲ့ဘဝမှာ. သူတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့တစ်ဦးစီတိုင်းကို မပြောပါက၊ ချုပ်နှောင်မှုတွင် မရှိမဖြစ်ဖြစ်လာသည်။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဗီဒီယို ခေါ်ဆိုတာပဲဖြစ်ဖြစ် မိသားစုနဲ့ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာပဲဖြစ်ဖြစ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Absolut ခရီးသွားခြင်း » ပြည်ပတွင်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ ဖိုင်ဘာမြန်နှုန်းအမြင့်ဆုံးနိုင်ငံများကဘယ်နိုင်ငံတွေလဲ။